မိမိအားမုနျးနသေူကို ခဈြစလေိုလြှငျ ဒါလေးတှလေုပျလိုကျပါ ပွနျခဈြလာပါလိမျ့မယျ – Youth Bar
မိမိအားမုနျးနသေူကို ခဈြစလေိုလြှငျ ဒါလေးတှလေုပျလိုကျပါ ပွနျခဈြလာပါလိမျ့မယျ
အရှငျဘုရား တပညျ့တျော ကို လူတဈယောကျက မုနျးနပေါတယျ၊ အဲဒါ ပွနျခဈြလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ နညျးလမျးရှိပါသလားဘုရား၊.
အဲဒီလူက အရငျကတော့ တပညျ့တျောကို ခဈြနှဈသကျပါတယျ။ အခုမှ မုနျးသှားတယျ ထငျတယျ၊နညျးလမျး ရှိတယျ ဆိုရငျကူညီပါအုံးဘုရ့ား၊
ဒါက ရနျကုနျက ဒါယကာမ တဈယောကျကပွောပွအကူအညီ တောငျးတဲ့ စကားလေးပါ၊
လောကမှာ လူတိုငျးလူတိုငျးအတှကျကိုယျ့ကို မုနျးတဲ့ရနျသူတှေ၊ ခဈြခငျပွီးမှ စိမျးကားရကျစကျသှားသူတှေ၊ ကိုယျကွီးပှားအောငျမွငျကြျောကွားနတောကို မနာလိုသူတှေ နဲ့
စီးပှားပွိုငျဘကျအခငျြးခငျြး ပွိုငျဘကျကို မကောငျးကွံပွီး အနိုငျယူတာတှေ အားလုံးဟာမကွုံခငျြလညျး ကွုံရ၊ မဆုံခငျြလညျး ဆုံရတဲ့ လူ့ဘဝထဲက အဖွဈအပကျြတှပေဲ မဟုတျလား၊
ဒါကွောငျ့လဲ လူ့ဘဝက တိုတောငျးပမေယျ့ စိတျကွညျနူးစရာက နညျးနညျး-စိတျဆငျးရဲစရာတှကေ တနတေ့နမှေ့ာ ကွုံရတာ မြားလှနျးလို့ လူတခု ပူမှု့ရယျကဆယျကုဋေ လို့တောငျ ရှေးလူကွီးတှကေငွီးတှားခဲ့ကွတယျ။
စာရေးသူက ဖွလေိုကျတယျ အျော ရှိပါတယျ၊ ဗဒေငျ ယတွာတှေ အငျးအိုငျ ခလှဲ့တှတေော့ မတတျပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ဘုရားဟောထားတဲ့ နညျးလမျး ကို ပွောပွပါ့မယျ၊
လူတျောတျောမြားမြား အဆငျပွသှေားကွတာ ဆိုတော့ ဒကာမလေးလဲပွလေညျနိုငျမယျ လို့ ထငျတယျ၊
ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ပွောပွထားတဲ့ အစီအစဉျအတိုငျး လုပျရငျ တကယျပဲအဆငျပွလေိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ၊ ဒကာမလေး ကို အကွောငျးပွုပွီးအားလုံးကို သိစခေငျြလို့ ဒီကနပေဲ ဖွပေေးလိုကျပါမယျ၊
ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီနညျးလမျးကို နှလုံးသားအတှကျ သကျသကျသာ မဟုတျပဲ
ကနျြတဲ့ စီးပှားရေး လူမှု့ရေး ဘာသာရေး စတာတှမှော နားလညျမှု့လှဲပွီး စိတျဝမျးကှဲနရေငျဖွဈစေ ရနျသူတှလေို ဆကျဆံနရေရငျ ဖွဈစေ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးအခငျြးခငျြး မညီညှတျပဲ စိတျညဈ သောက ရောကျနရေငျ ဖွဈစအေသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ကဲ ကောငျးပါပွီ၊ အောကျမှာ ဖျောပွမယျ့ နညျးလမျးလေးကို ပေးလိုကျတာ ၁၅ ရကျတောငျ မကွာလိုကျဘူး၊ အဲဒီ ဒကာမလေးဆီက ဖုနျးဆကျပွောပွပါတယျ၊
အရှငျဘုရား အဆငျပွသှေားပါပွီ၊ ကြေးဇူး အမြားကွီး တငျပါတယျ၊ တပညျ့တျော ပွောတဲ့လူတယောကျဆိုတာ အရှငျဘုရား ဒကာကွီးပါ။သူက အိမျကို ပွနျမလာတော့လို့ အကူအညီတောငျး၇တာပါတဲ့၊
တကယျတော့ ဒီနညျးလမျးကို အသုံ့းပွုရငျ ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးကွံထားသူတှတေောငျ လာပွီး ဒူးထောကျတောငျးပနျတာမြိုးတှေ ရှိခဲ့ဖူးတယျ လို့ ဆိုပါတယျ၊ဒါကွောငျ့ စာဖတျ ပရိသတျမြား သသေခြောခြာမှတျသားပွီး အကြိုးရှိရှိအသုံးပွုစခေငျြပါတယျ၊
၁၊ ဘုရားစငျရှမှေ့ာ သနျ့စငျတဲ့ ဖနျခှကျတဈခှကျထဲကို သောကျရသေနျ့သနျ့အပွညျ့နီးပါး ထညျ့ပါ၊
၂ ။ ပွီးတာနဲ့ ကြောကျခဲသေးသေးတလုံးကို ဆေးကွောပွီး ဖနျခှကျထဲ ထညျ့၇ပါမညျ၊
၃ ။ ကိုယျ့ကို မုနျးနသေူ မခဈြမနှဈသကျသူ ကို ဓာတျပုံရှိက ဓာတျပုံကိုဖနျခှကျဘေးမှာ ထောငျထားရပါမယျ၊
ဓာတျပုံမရှိလဲ သူ့ပုံရိပျကို အာရုံပွုပွီး ပှားမြားနိုငျပါတယျ၊ တခါမှ မမွငျဘူးသူ တဈယောကျကို ပို့လိုရငျတော့ သူ့ နာမညျကို ပါးစပျက ရှတျဆိုပွီး ပို့နိုငျပါတယျ။
ဆိုကွပါစို့ မောငျကြျောကို ဥပမာ အနနေဲ့ ပို့ကွညျ့ရအောငျ – –
ကဲ မောငျကြျော၊ မငျးက ငါ့အပျေါ မုနျးတီးနပေမေယျ့ ငါကတော့ မတ်ေတာမပကျြခဈြခငျနလေကျြပါ၊
ဒါကွောငျ့ မငျး အမုနျးတှပွေပြေောကျပွီး ငါ့အပျေါ ခဈြခငျစခေငျြပါတယျ၊
ရထေဲမှာ ရှိတဲ့ ကြောကျခဲလေးဟာ အေးမွနသေလို အခု မငျးကို အေးမွတဲ့ရထေဲမှာ စိမျထားလိုကျပွီ၊
မငျးရဲ့ ဒေါသတှေ ပွပြေောကျပွီး စိတျရော လူရော အေးခမျြးလာပွီး ငါ့အပျေါမတ်ေတာသကျဝငျလာပါစေ၊
ငါကတော့ မငျးကို အပွဈမမွငျပါဘူး၊ ဆကျလကျ ခဈြခငျနမှောပါ၊
လကျထပျထားသူ ဖွဈက အရငျလို ခဈြခငျပါစေ – စသညျဖွငျ့ ပါးစပျက ရှတျဆို၇ပါမယျ၊
ကြောကျခဲလေးကို လူအမှတျနဲ့ အာရုံပွုနိုငျအောငျ ကွိုးစားပွီးတဈနေ့ ၂ ကွိမျ ၃ ကွိမျလောကျ ပို့ရပါမယျ၊အကွိမျမြားစှာ ဆို၇ငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့၊
၄ ။ တဈဦးတယောကျအပျေါ ရညျစူးမတ်ေတာပို့ပွီးရငျတော့ သတ်တဝါအားလုံးနဲ့နတျဗွဟ်မာတှကေို တိုငျတညျပွီးမတ်ေတာပို့ အမြှဝေ ရပါမယျ၊
မွနျမာနိုငျငံ သာသနာ့ သမိုငျးမှာ မတ်ေတာအရာမှာ ထငျရှားကြျောကွားတဲ့ တောငျတနျးသာသနာပွု ဆရာတျောကွီး ဦးဥတ်တမ သာရကိုယျတျောတိုငျ ပေးသနားထားခဲ့တဲ့အတှကျယုံယုံကွညျကွညျ အသုံးပွုပွီး မုနျးသူ မနာလိုသူ ရနျသူအားလုံးကို ခဈြခငျကွငျနာနိုငျပါစေ၊
မှတျခကျြ၊ကိုယျက အမုနျးခံနရေမှ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ၊ကိုယျက မုနျးနသေူဆိုရငျတော့ အခြိနျယူပွီး ပှားမြားမှ သကျရောကျပါလိမျ့မယျ၊
မတ်ေတာဖွငျ့ လူအားလုံး ငွိမျးအေးနိုငျကွပါစေ။
အရှငျသုနန်ဒာလင်ျကာရ – M A ( ပနျးကမ်ဘာ )
မိမိအားမုန်းနေသူကို ချစ်စေလိုလျှင် ဒါလေးတွေလုပ်လိုက်ပါ ပြန်ချစ်လာပါလိမ့်မယ်
အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ကို လူတစ်ယောက်က မုန်းနေပါတယ်၊ အဲဒါ ပြန်ချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ နည်းလမ်းရှိပါသလားဘုရား၊.
အဲဒီလူက အရင်ကတော့ တပည့်တော်ကို ချစ်နှစ်သက်ပါတယ်။ အခုမှ မုန်းသွားတယ် ထင်တယ်၊နည်းလမ်း ရှိတယ် ဆိုရင်ကူညီပါအုံးဘုရ့ား၊
ဒါက ရန်ကုန်က ဒါယကာမ တစ်ယောက်ကပြောပြအကူအညီ တောင်းတဲ့ စကားလေးပါ၊
လောကမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့ရန်သူတွေ၊ ချစ်ခင်ပြီးမှ စိမ်းကားရက်စက်သွားသူတွေ၊ ကိုယ်ကြီးပွားအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတာကို မနာလိုသူတွေ နဲ့
စီးပွားပြိုင်ဘက်အချင်းချင်း ပြိုင်ဘက်ကို မကောင်းကြံပြီး အနိုင်ယူတာတွေ အားလုံးဟာမကြုံချင်လည်း ကြုံရ၊ မဆုံချင်လည်း ဆုံရတဲ့ လူ့ဘဝထဲက အဖြစ်အပျက်တွေပဲ မဟုတ်လား၊
ဒါကြောင့်လဲ လူ့ဘဝက တိုတောင်းပေမယ့် စိတ်ကြည်နူးစရာက နည်းနည်း-စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေက တနေ့တနေ့မှာ ကြုံရတာ များလွန်းလို့ လူတခု ပူမှု့ရယ်ကဆယ်ကုဋေ လို့တောင် ရှေးလူကြီးတွေကငြီးတွားခဲ့ကြတယ်။
စာရေးသူက ဖြေလိုက်တယ် အော် ရှိပါတယ်၊ ဗေဒင် ယတြာတွေ အင်းအိုင် ခလှဲ့တွေတော့ မတတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘုရားဟောထားတဲ့ နည်းလမ်း ကို ပြောပြပါ့မယ်၊
လူတော်တော်များများ အဆင်ပြေသွားကြတာ ဆိုတော့ ဒကာမလေးလဲပြေလည်နိုင်မယ် လို့ ထင်တယ်၊
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြောပြထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ရင် တကယ်ပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒကာမလေး ကို အကြောင်းပြုပြီးအားလုံးကို သိစေချင်လို့ ဒီကနေပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါမယ်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းကို နှလုံးသားအတွက် သက်သက်သာ မဟုတ်ပဲ
ကျန်တဲ့ စီးပွားရေး လူမှု့ရေး ဘာသာရေး စတာတွေမှာ နားလည်မှု့လွဲပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲနေရင်ဖြစ်စေ ရန်သူတွေလို ဆက်ဆံနေရရင် ဖြစ်စေ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်း မညီညွတ်ပဲ စိတ်ညစ် သောက ရောက်နေရင် ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ကောင်းပါပြီ၊ အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပေးလိုက်တာ ၁၅ ရက်တောင် မကြာလိုက်ဘူး၊ အဲဒီ ဒကာမလေးဆီက ဖုန်းဆက်ပြောပြပါတယ်၊
အရှင်ဘုရား အဆင်ပြေသွားပါပြီ၊ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်၊ တပည့်တော် ပြောတဲ့လူတယောက်ဆိုတာ အရှင်ဘုရား ဒကာကြီးပါ။သူက အိမ်ကို ပြန်မလာတော့လို့ အကူအညီတောင်း၇တာပါတဲ့၊
တကယ်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံ့းပြုရင် ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းကြံထားသူတွေတောင် လာပြီး ဒူးထောက်တောင်းပန်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်၊ဒါကြောင့် စာဖတ် ပရိသတ်များ သေသေချာချာမှတ်သားပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်၊
၁၊ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ သန့်စင်တဲ့ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကို သောက်ရေသန့်သန့်အပြည့်နီးပါး ထည့်ပါ၊
၂ ။ ပြီးတာနဲ့ ကျောက်ခဲသေးသေးတလုံးကို ဆေးကြောပြီး ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်၇ပါမည်၊
၃ ။ ကိုယ့်ကို မုန်းနေသူ မချစ်မနှစ်သက်သူ ကို ဓာတ်ပုံရှိက ဓာတ်ပုံကိုဖန်ခွက်ဘေးမှာ ထောင်ထားရပါမယ်၊
ဓာတ်ပုံမရှိလဲ သူ့ပုံရိပ်ကို အာရုံပြုပြီး ပွားများနိုင်ပါတယ်၊ တခါမှ မမြင်ဘူးသူ တစ်ယောက်ကို ပို့လိုရင်တော့ သူ့ နာမည်ကို ပါးစပ်က ရွတ်ဆိုပြီး ပို့နိုင်ပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့ မောင်ကျော်ကို ဥပမာ အနေနဲ့ ပို့ကြည့်ရအောင် – –
ကဲ မောင်ကျော်၊ မင်းက ငါ့အပေါ် မုန်းတီးနေပေမယ့် ငါကတော့ မေတ္တာမပျက်ချစ်ခင်နေလျက်ပါ၊
ဒါကြောင့် မင်း အမုန်းတွေပြေပျောက်ပြီး ငါ့အပေါ် ချစ်ခင်စေချင်ပါတယ်၊
ရေထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်ခဲလေးဟာ အေးမြနေသလို အခု မင်းကို အေးမြတဲ့ရေထဲမှာ စိမ်ထားလိုက်ပြီ၊
မင်းရဲ့ ဒေါသတွေ ပြေပျောက်ပြီး စိတ်ရော လူရော အေးချမ်းလာပြီး ငါ့အပေါ်မေတ္တာသက်ဝင်လာပါစေ၊
ငါကတော့ မင်းကို အပြစ်မမြင်ပါဘူး၊ ဆက်လက် ချစ်ခင်နေမှာပါ၊
လက်ထပ်ထားသူ ဖြစ်က အရင်လို ချစ်ခင်ပါစေ – စသည်ဖြင့် ပါးစပ်က ရွတ်ဆို၇ပါမယ်၊
ကျောက်ခဲလေးကို လူအမှတ်နဲ့ အာရုံပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးတစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ်လောက် ပို့ရပါမယ်၊အကြိမ်များစွာ ဆို၇င်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့၊
၄ ။ တစ်ဦးတယောက်အပေါ် ရည်စူးမေတ္တာပို့ပြီးရင်တော့ သတ္တဝါအားလုံးနဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေကို တိုင်တည်ပြီးမေတ္တာပို့ အမျှေဝ ရပါမယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာ့ သမိုင်းမှာ မေတ္တာအရာမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမ သာရကိုယ်တော်တိုင် ပေးသနားထားခဲ့တဲ့အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုပြီး မုန်းသူ မနာလိုသူ ရန်သူအားလုံးကို ချစ်ခင်ကြင်နာနိုင်ပါစေ၊
မှတ်ချက်၊ကိုယ်က အမုန်းခံနေရမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်၊ကိုယ်က မုန်းနေသူဆိုရင်တော့ အချိန်ယူပြီး ပွားများမှ သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်၊
မေတ္တာဖြင့် လူအားလုံး ငြိမ်းအေးနိုင်ကြပါစေ။
အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ – M A ( ပန်းကမ္ဘာ )
အရေးကွီးပါတယျ ဒီအခြိနျ လကျထဲရှိတဲ့ ငှကေို တနျဘိုးထားပ
ရကျတျောတျောကွာ ကနျြးမာရေး မကောငျးဖွဈနကွေောငျးကို ရငျဖှငျ့လာတဲ့ ပိုငျတံခှနျ